Faalo koban oo ku sabsan Farmaajo iyo Khayre – AfmoNews
Faalo koban oo ku sabsan Farmaajo iyo Khayre
Feburwary 2018 kii waxaa Isutagga Imaaraadka Carabta kulan ku yeeshay Wasiirkii 1 aad ee Soomaaliya xiligaas Xassan Cali Khayre iyo Khaalid Maxamed Bin Zaid oo ah kaaliyaha Ammaanka iyo Sirdoonka Aabihii.
Khayre iyo Khaalid waxay isu sheegeen ama ka wada hadleen lama wada oga , hasa ahaatee saraakiil ay dawladohoodu sir wadaag yihiin Imaaraadka ayaanka xansaday xog ku aaddan wixii kulankaa looga tashaday .
Khaalid wuxuu ku qanciyay Khayre in Doorashada soo socota ee Soomaaliya ay Dawladda Imaaraadku gacan mug leh siin doonto haddii uu ka hor tago hannaanka doorasho ee uu damacsan yahay Farmaajo ee qof iyo cod , wuxuu Khaalid sheegay inay Maamul Gobaleeyada ugu miisaanka culus ay gacan ku siinayaan Khayrre hadduu isu taago xilka Madaxwayne , Madaxda Garowe iyo Kismaayo waxay diyaar kuula yihiin inay xubno kuu codeeya si ay u helaan Wasiirka 1 aad ee Dalka si loo soo celiyo xiriirkii Abu-Dabi iyo Muqdisho meeshana looga saaro xiriirka Istanbul iyo Doxa.
Wuxuu Ina Bin Zaid u sheegay Khayre inaysan taageeradu kaligood ku ahayne ay ku weheliyaan dawlado miisaan leh oo saaxiib dhaw la’ah Imaaraadka sida Masar , Sucuudiga iyo Kenya, waxaa laga dalbaday R/W Khayrre inuu hor istaago hanaanka Xusbiyada iyo qof iyo cod ee uu doonayo Farmaajo taasoo shaki badan aan ku jirin haddii ay dhacdo inuu Farmaajo mar labaad kursiga kusoo laaban doono.
Kulankaas oo afaafkiisa dambe waxay isla goobta isku gacan qaadeen Khayre ninka maamula Ciidanka Badda ee Puntland Erik Prince oo ah ninkii aas aasay shirkadda BLACK WATER ee xasuuqa badan ka gaysatay Ciraaq taasoo gadaalkii Maxkamad Maraykanku leeyahay ay dambiyo badan ku qaadday amartayna in la xiro shirkadda gabi ahaanteedba.
Sarkaal sare oo aan shaqo wadaag soo noqonay haattana ka tirsan Safaarad ay Masaaridu ku leeyihiin mid ahaan Dawladaha Carabta ayaa iigu yimid aqalka wuxuuna ii sheegay wuxuu maqlay qaar, haddii ay shacabka Doorasho u dareeraan dhulka ay Dawladdu gacanta ku haysto waxay qabtaa Dawladda Imaaraadka iyo xulufadooda in xusbiga Farmaajo guulaysan doono.
Galbeedka Afrika Dawlad ku taalla oo ay Soomaaliya xiriir dheer soo lahaan jireen gu’yaal badan ayaa usoo dusisay war bixin ku saabsan qorshaha Imaaraadka ee Soomaaliya , siday ugu guulaysatay inuusan dhaqan galin awood siinta shacabka oo ah inay doortaan cidda deegaankooda uga wakiilka noqonaysa golayaasha Dalka kuwaas oo doorkooda dooran doona hogaamiyaha Dalka .
Duullaankii lagu qaaday Aqalka Qaybdiid iyo Ina C/Shakuur wuxuu ahaa isku day la doonayay in lagu kiciyo reeraha ay kasoo jeedaan colaadna looga huriyo Galguduud, dhanka kale wuxuu R/W Khayre aad uga shaqeeyay sidii Axmed Madoobe loogu aqoon san lahaa Maamulka Kismaayo .
waxaa guul daro ku dhamaaday isku day Farmaajo , Khadar Guled ay ku doonayeen in Khayre kasii mid ahaado Xusbiga Nabad iyo Nolol. Fahad oo ahaa Ninkii markii horaba ku qanciyay Farmaajo inuu Khayrre ka dhigo Wasiirka 1 aad ee Dalka ayaa gacan wayn ku siiyay Khadar Guuleed oo Farmaajo u xil saaray ridistii Khayre oo qaadatay 7 daqiiqo wax ka yar .
Dalalka colaadda u haya Turkiga ayaa xoog iyo xoolaba ku bixinaya sidii loo badali lahaa Farmaajo si geeska Afrika looga saaro Istanbuul oo xariir qaan gaaray la leh Muqdisho.
W/Q F Xiirane ( N.S.S 1976-1991 )
Wararkii ugu dambeeyay Shirka Musharaxiinta Mucaaradka iyo saamaynta uu yeelan karo
Musharaxiinta oo kulan gaar la qaatay Xildhibaano ka soo jeedo Waqooyi (SAWIRRO)
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo ku biiray Shirka Musharaxiinta ee Muqdisho ka socda
“Help is on the way,” Biden told coronavirus-infected Americans in revealing economic team
Security and justice committe Mogadishu 1 dec 2020
The UN warns food supplies for nearly 100,000 Eritrean refugees in Ethiopia’s Tigray
Chinese Chang’e-5 space probe successfully lands on the moon